Ubax Buttercream fudud + Casharro Video ah - Video Bilaash Ah
Ubaxyada Buttercream fudud
Ubaxyo buttercream fudud oo loogu talagalay bilowga saxda ah
Ubaxyadan fudud ee loo yaqaan 'buttercream' ayaa ah mashruuca ugu fiican ee loo yaqaan 'buttercream newbie'. Xitaa haddii aadan waligaa waligaa ubax dhigin, 5taan ubax ee petal ah way fududahay in la sameeyo!
sida loo sameeyo keeg u eg alwaax
Noocee ah buttercream ayaa ugu fiican in la isticmaalo si loo sameeyo ubaxyo caano ah?
Waxaad u badan tahay inaad naxdo markaad ogaato inaad ku tuubmi karto nooc kasta oo nooc oo ah buttercream, kareemo duug ah ama ganache. Subag adag oo adag sida Buttercream Mareykan ah way ka xasilloonaan doontaa kuleylka laakiin geesaha caleemaha ayaa xoogaa yara jiidan doona sababtoo ah sonkorta budada ah ee dheeriga ah. Abaalmarin kale waa ka dib markay xoqmaan, way ka adag yihiin waxyeelada.
Waxaan jeclahay isticmaalka frosting buttercream fudud in la tuubo ubaxyadayda maxaa yeelay geesaha ayaa ka siman laakiin waxay u nugul yihiin kuleylka. Waad ku beddeli kartaa kala badh ama dhammaan subagga cuntadeyda fudud ee qabow-biyoodka si ay ubaxyadu u sii xoogaystaan.
Fudud ubax ubaxa subag-fudud - Hubso in buttercream-kaaga uu yahay mid siman oo aan xumbo lahayn ka dib adoo isku qasaaya buttercream-kaaga hooseeya lifaaqa suufka 10-15 daqiiqo kadib markaad sameyso.
Qalab noocee ah ayaad u baahan tahay si aad u sameysid ubaxyo subag badan?
Si aad u sameysid ubaxyo subag fudud. Waxaad u baahan tahay oo keliya qalab yar. Waxaan helay Michaels laakiin waxaad sidoo kale si fudud uga heli kartaa qadka tooska ah.
Lamaane (ikhtiyaari ah)
# 104 caarada dhuumaha
# 3 caarada dhuumaha (ikhtiyaar)
# 352 caleen caleen (ikhtiyaar)
Laba jibbaaran warqad ayaa loo jarjarey 3 ″ x3 ″
Xaashida cookie ama digsiga qaboojiyaha
Sidee u sameysaa ubaxyo subag fudud?
U jaro xaashiyahaaga jajabyo yaryar (qiyaastii 3 ″ x3 ″)
Midabee subagaaga. Waxaan u isticmaalay midab casaan koronto casaan casaan iyo buluug boqornimo Ameerika
Fur furaha oo ku rid qaybta weyn boorsada tuubada. Iska yaree caarada boorsada tuubbada si nuska lammaanaha ah uu uga dhex baxo daloolka.
Ku dhaji caarada tuubadaada 104 lamaanaha oo ku xir daboolka si aad uhesho caarada
Boorsadaada ku buuxi midabka aad doorbideyso ee subagga badan.
Ku rid waxoogaa yar oo ah buttercream ciddiyahaaga dhuumaha si aad ugu dhejisid laba jibbaaran
Qabo caarada dhuumaha si qaybta ugu buuran ee caarada ay u ahaato bartamaha qaybta khafiifka ahna ay ugu jeeddo banaanka.
Sameynta qaab yar oo ah 'U', tuubbo birahaaga ugu horreeya, ka bilow oo ka joogso bartamaha.
Wareeji ciddiyahaaga iyo tuubo geedka xiga. Sii wad ilaa aad tuubo 5 dhaladood.
Ubax ka saar ciddiyaha adiga oo kor u qaadaya warqadda soo dejisa oo ku rida xaashida cookie-ka. Waxaan barafoobi doonnaa ubaxyada subagga ka hor intaanan dhigin keega.
Ubax buttercream fudud oo caara ah - Ku tababar 10-15 ubax KOOWAAD ka hor intaadan isku dayin inaad midkoodna haysato. Waxaad si dhakhso leh wax uga baran doontaa sida adag ee aad ugu baahan tahay inaad isku xoqdo oo aad u hagaajiso farsamadaada. Kaliya xoq ubaxyada tababarka dib ugu soo celi weelka.
Waa intaas! Taasi waa sida aad u sameysid ubaxyo fudud oo subag badan. Waxaan ubaxyadayda u sameeyay keegga arooska ee soo socda dib-u-sameeya miyaan dib-u-u-abuuray keeggii ugu horreeyay ee arooska! Marka isha ku hay casharkaas.
Dhanka kale, haddii aad diyaar u tahay inaad hubiso ubaxyo subag badan oo cabsi badan, hubso inaad tan daawato barashada keega ubaxa buttercream ka socota macallinka martida ee Danette Short. Waa bilaash!
Cunto macaan, hodan ah oo fudud oo qabow badan oo qofkastaaba sameyn karo. Tani maahan qolof qolof ah. Waxay leedahay iftiin yar oo si fiican ugu qabow qaboojiyaha. Waxay qaadataa 10 daqiiqo in la sameeyo waana doqon-caddeyn! Iftiin, qalafsan oo aan macaan badnayn. Wanaagsan tahay tuubooyinka ubaxa buttercream
Waqtiga Diyaarinta:5 daqiiqado waqti isku qasid:labaatan daqiiqado Wadarta Waqtiga:25 daqiiqado Kalori:849kcal
▢24 oz subag aan cusbo lahayn heerkulka qolka. Waxaad isticmaali kartaa subagga cusbada laakiin waxay saameyn doontaa dhadhanka waxaadna u baahan tahay inaad ka tagto cusbo dheeraad ah
▢24 oz sonkorta budada ah shaandheeyey haddii aan laga soo qaadin boorso
▢6 oz ukunta la kariyey
▢1 TINY dhibic midabaynta cuntada guduudan (ikhtiyaari) qabowga cad
Ku rid ukunta cad iyo sonkorta budada ah baaquli fiicni dhalada. Kusoo lifaaq buskudka oo isku dar walxaha si hoose kadibna karbaash kor ugu kar 5 daqiiqo
Ha ku karino kor ilaa 8-10 daqiiqo illaa ay ka caddaanayso, fudeyd iyo dhalaal ka muuqato.
U adeegida:labag|Kalori:849kcal(42%)|Kaarboohaydraytyada:75g(25%)|Protein:labag(4%)|Dufan:61g(94%)|Dufan Dufan:38g(190%)|Kalastarol:162mg(54%)|Sodium:240mg(10%)|Kalibaalium:18mg(1%)|Sonkor:74g(82%)|Vitamin A:2055IU(41%)|Kaalshiyamka:18mg(laba%)|Bir:0.4mg(laba%)
sida loo sameeyo keega strawberry oo qoyan
sidee u sameysaa ganache shukulaatada cad
keeg cad ka soo xoq